ဒါပေမယ့် ညာခဲ့တယ်လို.ပဲ သဘောထားပေးပါ
ငါ့ကိုငါမုန်းတာကိုတော့ မမှီနိုင်ပါဘူး။ ။
Posted by Maw Ni at 11:49 AM
၁။ လူမပြောင်းလျှင် မူမည်မျှပင်ပြောင်းပြောင်း ကောင်းမလာနိုင်ပါဟု ပြောသံသဲ့သဲ့ ကြားမိပါသည်။ လူလည်း မပြောင်းပါ။ ခေတ်ပြောင်းချင်ပြောင်း၊ စနစ်ကလည်း ပြောင်းမည်မထင်ပါ။ ဤခေတ်၊ ဤစနစ်ကို မကောင်းတွင်တွင်ပြော၍ အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲမှုကို လက်ခံရန် မ၀ံ့ရဲသော၊ ပြောင်းလဲမှု အတွက် အသင့်မဖြစ်သော လူများအတွက် ဤစာစုကိုရေးမိပါသည်။
၂။ တိုင်းပြည်တစ်ခုအတွက် အရေးအကြီးဆုံးသည် (ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ) အစိုးရ ယန္တရားပင် ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရယန္တရားတွင် ထိုယန္တရားကို လည်ပတ်စေသော ဌာနများသည် အဓိကဖြစ်ပါသည်။ သို.ရာတွင် ထိုဌာနဆိုင်ရာတို. လည်ပတ်နေသော နည်းစနစ်များသည် (အများစုမှာ) အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာစ အချိန်ကာလမှ နည်းစနစ်များနှင့် ကွာခြားပါ၏လောဟု သံသယ ပွားရပါသည်။ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကာလတွင် မည်သည့်စီမံကိန်းကိုပဲ ရပ်ဆိုင်း၍ မည်သည့်စီမံကိန်းကိုပဲ အသစ်ပြန်စစ၊ ထူးခြားလာမည်မဟုတ်ဟု ဆိုရပါမည်။
၃။ စီမံကိန်းများ မအောင်မြင်သည့်အခါတိုင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် တိုးတက်မှုမရ၍ စူးစမ်းမေးမြန်းခံရတိုင်း တောင်းဆိုတတ်သော ကိစ္စသုံးရပ် ရှိပါသည်။ သရီးအမ်မ် (3M) ဟုခေါ်ကြသော လူ၊ငွေ၊ပစ္စည်း (Man, Money, Material) ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အခါများစွာပင် ဖွဲ.စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဟူသည် အဆိုပါသုံးရပ် တိုးမြှင့်တောင်းခံရေးဖြစ်သွားတတ်ပါသည်။ ထိုအခါ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ပြင်ဆင်ရေးသည် ၀န်ပေါ့သွားရမည့်အစား ပို၍ပင် ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်သွားရပါသည်။
၄။ ဖူကူယားမား၏ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး စာအုပ်တွင် ဈေးကွက်စနစ်ဖေါ်ဆောင်ရေး၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုရေးထက် အရေးကြီးလေသော အချက်တစ်ခုကို ထပ်တလဲလဲ ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။ ယင်းမှာ အဖွဲ.အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရေး ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ.အစည်းစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရေးကို လူတိုးတောင်းရေး၊ ငွေတိုးတောင်းရေး၊ ပစ္စည်းတိုးတောင်းရေးနှင့် မရောထွေးစေချင်ပါ။
၅။ အချို.က ကြိုးနီစနစ်ဟု ပြောကြသော ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် (ပြောခဲ့ပြီးသလို) လွတ်လပ်ရေးရကာစခေတ်နှင့် မခြားဖြစ်နေပါသေးသည်။ ထို.အပြင် ဌာနဆိုင်ရာ ဖွဲ.စည်းပုံ များသည် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ.စည်းရန် ခက်သည်ကတစ်ကြောင်း၊ မည်သူမှ ဦးနှောက်ခြောက်ခံ စဉ်းစားမနေသည်ကတစ်ကြောင်းကြောင့် ရှိရင်းစွဲအတိုင်းသာ ရောကြိတ်နေကြပါသည်။ မည်သူကမှ ရှိရင်းစွဲ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်လည်၍ ပိုမို ကောင်းမွန်သက်သာလွယ်ကူသော နည်းကို စဉ်းစားရန်မကြံစည်ကြပါ။ သူရို.ဆီဝယ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဟူသည် ငွေကြေး၊ အချိန်၊ လူအင်အားလျော့ချရန်အတွက် ခေတ်မှီနည်းစနစ်များ၊ စီမံခန်.ခွဲမှု ပုံစံများကို အသုံးပြုခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
၆။ ခက်သည်က ပေါ်လစီမိတ်ကာလယ်ဗယ်ဖြစ်သော လူတန်းစားသည် ခေတ်မှီ နည်းပညာကို မသိပါ။ စီမံခန်.ခွဲမှုကို မလေ့လာပါ။ လူမှန်နေရာမှန်ကို (ဖွဲ.စည်းပုံအသေဖြစ်၍လည်း ပါပါသည်) မထားရှိပါ။ ပြောရသည်ကိုတော့ အားနာပါသည်။ တိုးတက်ရေးကိစ္စအတွက် ကိုယ့်ဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံဖြစ်စဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်မှု အင်မတန်အားနည်းပါသည်။ သူရို.ဆီဝယ် Enterprise Architecture, Business Process Reengineering စသောမိုဒယ်များဖြင့် စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ် တည်ဆောက်အပ်သော ဌာနအဖွဲ.အစည်းများစွာ ပေးထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ ထိုသို.သော သုံးသပ်မှုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံဝယ် အင်မတန်မအားနည်းပါသည်။ ရှိရင်းစွဲလူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အပြည့်အ၀ အသုံးချနိုင်ခြင်းလည်းမရှိပါ။
၇။ အဖွဲ.အစည်း စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားလာစေရန် ဒီဇိုင်းပြန်ဆင်မည့် မူဝါဒရေးဆွဲသူများ မရှိသလို ပေးလာမည့်အကြံဥာဏ်ကို နားလည်လက်ခံမည့်သူ မရှိသလောက်ရှားနေသည်ကို ၀မ်းနည်းဖွယ်တွေ.နေရပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား အတွင်း ဒီမိုး ဒီရေ ဒီလူတွေဖြင့် ဒီအတိုင်းသွားနေပါက သိကြားမင်း ဆင်းကယ်သည့်တိုင် တိုးတက်ရေးလမ်းစ မမြင်ပါ။
၈။ အရှေ.က နေ၀န်းထွက်သလို တို.ခေတ်ကိုတော့ ရောက်ရမည်မှာ မလွဲပါ။ ထို.အတူ နောက်နှစ်ပေါင်းမည်မျှမှန်းလည်း မသိပါချေ။
Posted by Maw Ni at 1:45 PM
Labels: ပညာရပ်, ဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး
၉။ တိုင်းပြည် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ်မှားယွင်းခြင်း နှင့် တိုင်းပြည်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ် အကောင်အထည်ဖေါ်ရာတွင် မအောင်မြင်ခြင်းသည် ရလာဒ်အကျိုးတရား တူသည်ထားဦး။ ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရမည့် အကြောင်းတရား တူမည်မဟုတ်ပါ။ ထို.အတူ ပြည်သူလူထုက အပြစ်တင်သည်ကို ငြင်းဆန်ရန် ရည်ရွယ်ရင်းမရှိသော်လည်း 'အများညီ၍ ဤကို ကျွဲ' ဖတ်ကြပါများလာသောအခါ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ မီဒီယာသမားများကပါ သံယောင်လိုက်၍ စနစ်မှားသည် စနစ်မှားသည်ဟု ပြောလာကြပါတော့မည်။ ကျန်းမာရေး နယ်ပယ်မှ ဆရာမကြီး တစ်ဦး ပြောသော စကားကို ပြန်လည်ကိုးကား ဖေါ်ပြလိုပါသည်။ 'တကယ်တော့ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနကလည်း WHO (ကမ္ဘာ. ကျန်းမာရေး အဖွဲ.) ဂိုက်လိုင်းအတိုင်း လုပ်နေတာပဲ' ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအကြောင်းများကို အသေး မစိတ်မီ ခေတ္တ ရပ်နားထားပါဦးမည်။
၁၀။ ဆရာဝန်များသည် အင်မတန် အတ္တကြီးသူများဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်တင်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ဤအတိုင်းပင် ခံစားမိပါသည်။ ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကို တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အမှတ်ဖြင့် ဖြတ်လိုက်သောအခါ 'ထိပ်' ဆိုသောနေရာမှ ကျောင်းသားများ (ထိပ်ဆိုသော နေရာကို ရောက်အောင် နည်းမျိုးစုံ ကြိုးစားလာကြသူများ) ဆေးကျောင်းတက်လာကြပါတော့သည်။ ထိပ်ရောက်အောင် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ပို.ချင်ကြသော မိဘများကလည်း (အဆိပ်ပင် ရေလောင်းသည်မပြောရက်သည့်တိုင်) တရားသည်မတရားသည် မတွေးပဲ သားသမီးဖြစ်သူအတွက် နည်းမျိုးစုံ ကြိုးစားအားထုတ်ပေးကြပါသည်။ အားနာနာနှင့်ပင် ပြောရပါမည်။ ဆရာဝန်ဘွဲ. ရပြီးသည့်တိုင် လူမှုရေးရာတွင်၊ လူ.ပတ်ဝန်းကျင် လူ.အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် လူလားမမြောက်သေးသော ဆရာဝန်လေးပေါင်းများစွာ ရှိနေပါသည်။ ငါသာရှေ.ရောက်ဖို.၊ ငါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ဖို.၊ ငါအောင်မြင်ဖို. ဆိုသည့် စိတ်ဓာတ်များခြင့် ပူလောင်နေကြသူများ များနေပါသည်။ အားနာပါသည်။ များနေပါသည်။ များခဲ့ကြပါသည်။
၁၁။ လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ရောက်သည့်အခါတွင် သင်ယူလာခဲ့သော ပညာကို ပြည်သူလူထုအတွက် အသုံးချရန်ထက် နောင်တွင် လျှောက်ရလတ္တံ.သော ခရီးလမ်းဖြောင့်ဖြူးရေး အတွက်သာ ဦးစားပေးရွေးချယ်မည့် ဆရာဝန်များ များလာခြင်းသည် ကောင်းသော လက္ခဏာဖြစ်ပါသလား။ စာသင်ကြားရခြင်းကို ၀ါသနာ လုံးဝမပါသော်လည်း မြို.ကြီးပြကြီးများတွင် နေရခြင်း၊ ညဂျူတီမစောင့်ရခြင်း၊ စနေတနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက် ရခြင်း စသည်ဖြင့် စာကျက်ချိန်ရသော ဆေးတက္ကသိုလ်များတွင် ဆရာအဖြစ် အလုပ်ဝင်ခြင်းဖြင့် 'အရိပ်ခို' နေချင်ကြသော ဆရာဝန်လေးများစွာရှိခဲ့ပါပြီ။ ထို.အတူ အထက်လမ်း အောက်လမ်းများစွာ သုံး၍ 'မြို.ကြီးပြကြီး' များတွင် ခိုကပ်နေကြရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသော ဆရာဝန်များ ယခင်ကလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုလည်း ရှိကြပါလိမ့်ဦးမည်။
၁၂။ တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းတရား မဟုတ်သည့်တိုင် ဤသို.သော အကြောင်းများဖြင့် နယ်သို. သွားချင်သော ဆရာဝန်များ နည်းပါးပါသည်။ ဆရာဝန် လူဦးရေအချိုးသည် မြို.ပေါ်နှင့် ကျေးလက် မတူညီသလို ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ချင်းပြည်နယ် တူမည်မဟုတ်ပါ။ ဆရာဝန်များ နယ်သို.မသွားချင်ခြင်းကို အပြစ်တင်နေသည်မဟုတ်ပါ။ 'ကုသိုလ်၊ ပညာ၊ ဥစ္စာရရန် သင့်ရာဒေသ' အမြဲနေလိုချင်ကြသူများကို အပြစ်တင်သင့်သည်ဟုလည်း မခံယူပါ။ တိုင်းပြည်အတွက်၊ လူထုအတွက် ဟူသည် ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်တွင်သာ ပြော၍ ကောင်းပါသည်။
၁၃။ အခြားသော (ဆရာဝန် မဟုတ်သည့်) ၀န်ထမ်းများ အတွက် နေရာကောင်းခြင်းသည် မြို.ပေါ်နယ်ပေါ်နှင့် မဆိုင်ပဲ 'ခွင်' ကောင်းမကောင်းပေါ်တွင်သာ မူတည်ပါသည်။ အပြင် 'ဂျီပီ' ဖွင့်ရသော ဆရာဝန်များ အနေနှင့် ၀င်ငွေအနည်းအများသည် ခွင်ပေါ်တွင် မူတည်နေခြင်း မဟုတ်ပဲ ကိုယ်ပင်ပန်းမှ ကိုယ်စားရသော ကိစ္စသာဖြစ်သဖြင့် နယ်မသွားလိုခြင်းကို အပြစ်တင်ရန် အကြောင်းမရှိပေ။ ဆေးရုံများတွင် နေ.ဂျူတီ၊ညဂျူတီများဖြင့် ပင်ပန်းရသော ဆရာဝန်သည် မြို.ပေါ်၊နယ် မခြားနားပါ။ (နယ်မှာပင် ပိုပင်ပန်းဖို.များပါသည်)
၁၄။ ကျန်းမာရေး ပေါ်လစီ ကောင်းမကောင်း 'ရောင်ပြန်'ဟပ်သော အရေးကြီးသည့် တစ်ခုတည်းသော ညွှန်းကိန်းမှာ 'ကျန်းမာရေးစွမ်းအားစုများကို လုံလောက်စွာ နေရာချထားခြင်း' allocation of adequate resources ဖြစ်ပါသည်။ စွမ်းအားစုများ မလုံလောက်သည့်အခါ၊ နေရာချထားမှုများ လိုအပ်ချက်ရှိလာသည့်အခါ ကျန်းမာရေး ပေါ်လစီကို မေးခွန်းထုတ်ရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ မသွားချင်သောသူကို သွားစေရန်အတွက် ဥုံခံသော မန္တန်တော့ ရှိမည်မထင်ပါ။ မတူသော အနေအထား၊ မတူသော ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုအတွက် တူညီသော လခဖြင့် စေလွှတ်ခြင်းသည် ပေါ်လစီကောင်းတစ်ခုပင်လား။ စဉ်းစားဖွယ်တော့ ရှိနေပါပြီ။
Posted by Maw Ni at 1:42 PM
Labels: ကျင့်ဝတ်, ပညာရပ်, ဆေးပညာ, ဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး
၁။ သူရဲတစ္ဆေကြောင်းပြောသည့်အခါ မရည်ရွယ်သော်လည်း မုသာဝါဒ ဖြစ်သွားတတ်သည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ ထို.အတူ ကျန်းမာရေးကြောင်း ပြောသည့်အချိန်တွင် ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ နိုင်ငံရေးအကြောင်းများဝင်လာတတ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးသမားတို.ကလည်း နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ တိုးတက်မှု ဆုတ်ယုတ်မှုတို. အတွက် မက်လုံး ပေးရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကို ချိန်ရွယ် ပစ်ခတ်လေ့ရှိကြသည်။ ကျန်းမာရေးအကြောင်းသည် ပြောရလွယ်သလို ငြင်းရလည်းလွယ်ပါသည်။ သိသလိုလို နှင့် မသိသည်များလည်း တပုံကြီး ရှိနေနိုင်သလို သိသည်ဖြစ်စေ မသိသည်ဖြစ်စေ အာပေါင်အာရင်းသန်ရန်လည်း လွယ်ပါသည်။ သိ၍ တတ်၍ မဟုတ်သော်လည်း ကြားဘူးနားဝ အချို.ကို ပြောပြချင်လာသည်။ ကျန်းမာရေးကြောင်းပါ။ နိုင်ငံရေးကြောင်း မဟုတ်ပါ။
၂။ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ တိုးတက်မှု၊ ဆုတ်ယုတ်မှု အကြောင်းကို ပြောသည့်အခါ ဆုံးဆုံးဖြတ်ဖြတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ခဲယဉ်းပါသည်။ နှိုင်းရတရားဖြင့် ပြောရမည်လား၊ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ ဟုန်းကနည်း တက်သည်ဖြင့် ပြောရမည်လား၊ သဘာဝ သယံဇာတ ကြွယ်ဝမှုဖြင့်ပြောမည်လား၊ ပြည်သူပြည်သားတို. ဘေးကင်းလုံခြုံ ပျော်ရွှင်မှုဖြင့် ပြောမည်လား။ တိုင်းတာ တွက်ချက်ရန် ခက်ခဲသော အခြေအနေ၊ အနေအထားတစ်ရပ်ကို ပြောလိုသည့်အခါ ညွှန်းကိန်း indicators များဖြင့် ပြောကြပါသည်။ သို.သော် ထိုညွှန်းကိန်းများသည် အခြေအနေတစ်ရပ်ကို တိတိပပပြောပြခြင်းဟု မဆိုနိုင်ပဲ အခြေအနေတစ်ရပ်၏ ရောင်ပြန် reflection သာ ဖြစ်သည်ဟူသော အချက်ကို မမေ့ကြရန်လည်း လိုပါသည်။ ထိုညွှန်းကိန်းများသည် အပြောင်းလဲကို ပြညွှန်ပါသည်။ အပြောင်းအလဲ၏ မြန်နှုန်းကို သိနိုင်ပါသည်။
၃။ နိုင်ငံတိုးတက်မှုအပြောင်းအလဲကို ညွှန်ပြကြရာဝယ် တိုက်ရိုက်သိနိုင်သော တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ၊ ဂျီဒီပီ၊ ဂျီအန်ပီ စသည်တို.သာမက ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်းကိန်းများသည်လည်း အရေးတကြီးပါဝင်လာပါသည်။ အထူးသဖြင့် တိုးတက်မှုသာမအက ဖွံ.ဖြိုးမှုကိုပါ တောင်းဆိုလာသောအချိန်တွင် ကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများကို စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်ရပါတော့မည်။ အကျယ်ပြောရန်မရှိပါ။ ထောင်စုနှစ် ဖွံ.ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်များ (MDGs) တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်စပ်သော ညွှန်းကိန်းများ မည်မျှပါသည်ကိုသာ ပြန်လည် လေ့လာစေချင်ပါသည်။
၄။ ထိုသို.ကျန်းမာရေး ညွှန်းကိန်းများ၏ အရေးပါမှုကို သိလာကြသောအခါ ကျန်းမာရေး ဘက်ကို ဦးလှည့်လာကြပါသည်။ စေတနာပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ ကျန်းမာရေးးးးးးးးးးးးးး ဆိုသော စကားကို တဖွတရ ပြောလာကြပါသည်။ မသိသူကလည်း ကျန်းမာရေး၊ သိသူကလည်း ကျန်းမာရေး၊ ပြည်သူကလည်းကျန်းမာရေး၊ နိုင်ငံရေးသမားကလည်း ကျန်းမာရေး။ ထိုသို.ကျန်းမာရေးလာကြသောအခါ ကျန်းမာရေးဟူသော အဓိပ္ပါယ်သည် လူတကာအပြောများလွန်း၍ အပေါစားဖြစ်သွားသော စကားတစ်လုံးဟု မှတ်ယူရပေတော့မလို ဖြစ်နေပါသည်။
၅။ သိတော်မူကြသည့် အတိုင်း နိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ညွှန်းကိန်းများကလည်း (ကျန်းမာရေး အခြေအနေဟု မပြောပါ) အားရဖွယ် အနေအထားကို မရှိသည့်အခါ လွယ်လင့်တကူ ထိုးချင်သော လက်ညိုးများသည် ကျန်းမာရေး=ဆရာဝန်ဟု ကောက်ချက်ချကြပါတော့သည်။ ထို.အတူ မအောင်မြင်သော စရိတ်မျှပေး ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်၊ (အစစ အလကားရခဲ့သော ဆိုရှယ်လစ်စနစ်မှ ဆာလာအိတ်နှင့် ငွေထည့်လာရသော အခြေအနေသို. ကူးပြောင်းနေသော) ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံဆေးခန်း၊ ပညာရပ်သဘောတရားကို မသိပဲ လူနာဆုံးပါးသည်ကို ဆရာဝန်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စနစ်ကိုဖြစ်စေ ပုံချလိုသော ဂျာနယ်အချို.၊ စသည်တို.သည် အခြေအနေကို ဆိုးသည်ထက်ဆိုးအောင် ဖန်တီးနေကြသည်။ ဆရာဝန်သည်သာ ဖြစ်သမျှ အခြေအနေ၏ တရားခံ။
၆။ သို.ရာတွင် ပို၍ ဆိုးသော အချို. 'ဆရာသမား' များ ရှိပါသေးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စနစ်ညံ့ဖျင်းနေ၍ ညွှန်းကိန်းများ တက်မလာခြင်းသာဖြစ်သည်၊ ချာတူးလန်နေသော ကျန်းမာရေး ပေါ်လစီင်္ကြောင့် ပြည်သူလူထု နစ်နာနေရသည်။ အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသော ဆရာဝန်များကို မွေးထုတ်နေ၍ တိုင်းပြည် ဖွံ.ဖြိုးရေး နောက်ကျနေပါသည်။ စသည်၊ စသည်ဖြင့် မှန်သည်မှားသည် ပြောရခက်သော အကြောင်းအရာများကို အာသန်သန်၊လျှာသန်သန်ဖြင့် ပြောကြပါသည်။ မှန်သည်လည်းရှိ၊ မှားသည်လည်းရှိသော အကြောင်းအရာများ၊ အမှန်အမှား အဖြေမထွက်သေးသော ကိစ္စရပ်များကို ရမ်းတုတ်သောအခါ အဟုတ်ထင်သော သူတို.ကထင်ကြပါသည်။ အကောင်းထက် အဆိုးကသာ များမည်ဟု လေးအနက်ဆိုပါသည်။ ထိုရောအခါ လွယ်လွယ်ပေါ့ပေါ့လေး ပြောကြသူများကို ဆိုစရာ စကားများကရှိလာသည်။ အထူးသဖြင့် 'ကိုယ့်လူများ' (ဆရာဝန်များ) ထဲကပင် ထိုသို. လွယ်လင့်တကူ 'အပြစ်တင်ဝေဖန်သမှု'
ပြုလာကြသောအခါ အခြားသော မျက်နှာစာများ ရှိနေပါကြောင်း သတိပေးလိုပါသည်။
၇။ ထိုသို.သောသူများကို အလေးအနက်ဆိုလိုသည်မှာ ကျန်းမာရေးသည် 'ရှုကြည့်စရာ' မှန်ကူကွက်ပေါင်းများစွာ Multidimensional ရှိနေပါသည်။ ထို မှန်ကူကွက်တို.တွင်လည်း များစွာသော နောက်ခံ အကြောင်းချင်းရာတို. ရှိနေပါသည်။ ထိုအကြောင်းချင်းရာတို.ကို အချို.သိရှိပြီး ဖြစ်သော်လည်း အချို.မှာ သိရှိရန် လိုအပ်ဆဲဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး အကြောင်းကိစ္စရပ်သည် ပရိုဖက်ရှင်နယ်များအတွက်ပင် တိုင်းတာ တွက်ချက်ရန် ရှုပ်ထွေးနေပါသေးသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ ညွှန်းကိန်း အမျိုးအစားတစ်ရပ်ထဲဖြင့် ဖေါ်ပြဆုံးဖြတ်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိစေလိုပါသည်။
၈။ ပြောသမျှ၏ အချုပ်သည် နိုင်ငံတော် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စနစ်အကြောင်း လွယ်လွယ်ပေါ့ပေါ့ အပြစ်တင်မစော ရန်သာဖြစ်ပါသည်။ ( ဆန္ဒ မစောစေလိုပါ၊ အပြစ်တင်ထိုက်သော ကိစ္စများကို အပြစ်တင်ပေးပါမည်၊)
Posted by Maw Ni at 1:33 PM
Labels: ပညာရပ်, ဆေးပညာ, ဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး
အဖေနေမကောင်းတဲ့ကြား၊ အစည်းအဝေးခန်းထဲ မ၀င်ခင်ကြား တက်သုတ်ရိုက်ရေးရပါတယ်၊ (အစည်းအဝေးဆိုလို. အထင်မကြီးပါနဲ.၊ အခိုင်းခံရဖို.၀င်တာပါဗျ)
ခုတလောကြားကြားနေရတဲ့ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်က သူရဲကောင်းများဆိုပြီး သွေးကြွနေကြတယ်၊ သမ္မတကြီးက ပိုနားလည်တယ်၊ ဘယ်သူက ပိုနားလည်တယ်နဲ. ဖေ့ဘုတ်စကားဖေ့ဘုတ်နားမှာ ခါးအောင်ဆိုနေကြတော့ အူထဲက ကလိကလိဖြစ်လာလို. ရေးမိပါတယ်။
တကယ်တော့ ဖေ့ဘုတ်မှာ အသားလွတ်အော်ဆဲတတ်တဲ့ မိမနိုင်ဖမနိုင်လေးတွေလည်း တပုံကြီးဆိုတာ သိနေသလို ပညာရပ်သဘောကို ထဲထဲဝင်ဝင်သိပြီး သိသလောက်ဖြန်.ဖြူးနေကြတဲ့ ပညာသုတေသီတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ခက်ပုံက (ကိုယ့်အတွေ.အကြုံအရဆိုရင်) ပညာရပ်ဆိုင်ရာမှာ သိစေချင်လို. အင်အားစိုက်ထုတ်ပြီး ရေးထားတဲ့စာဆိုရင် ပြန်လည်ဖြန်.ဖြူးသူနည်းနည်း၊ လိုက် (like) လုပ်သူနည်းနည်းပဲရှိသလောက် ဆဲဆိုကြုံးဝါးမိတာဆိုရင် တို.လည်းဆဲမယ်ချန်မထားနဲ.တွေက တပုံကြီးလေ။
အွန်လိုင်းမီဒီယာ ဆိုတာမျိုးက ပရင့်မီဒီယာလို တာဝန်ခံတည်းဖြတ်ပေးမယ့် အယ်ဒီတာမရှိတော့ ကိုယ့်ဘာသာပဲ ကိုတားဂတ်ထားတဲ့ လူအုပ်စုလောက်ကို မှန်းရေးနေရတာပါ။ မသိမသာလေး မြှင့်ပေးလည်းပေးရပါတယ်။ (နင့်ကိုယ်နင် အထင်ပြီးလှချည်လားဆိုလည်း မတတ်နိုင်ပါ၊ ရောယောင်ပြီး ဘုရားဟော ကူးချပြီး ဆရာကြီးလုပ်သူတွေနဲ.စာရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်လေး လက်တစ်ဆစ်လောက်အထင်ကြီးထားမိပါသဗျ)
ကိုးကားရလွန်းလို. ကာလာမသုတ်လည်း တော်တော် နွမ်းနေလောက်ပါပြီ။ တတ်နိုင်ဘူးလေ၊ သူရို.က ဖေ့ဘုတ်မှာ ဆဲနေတဲ့သူတွေ နဲ. တတန်းထဲထားပြီး နိုင်ငံကောင်းဖို. သိသလောက်ပြောမိနေသူတွေကို ၀ါးလုံးချေးသုတ်ယမ်းနေတာကိုး။ တကယ်တော့ လူဆိုတာ တဦးချင်းကိစ္စပါ။ ဖေ့ဘုတ်မှာဆဲသူတွေ ပေါတာနဲ.ပဲ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်ကသူရဲကောင်းတို.၊ လွတ်ရာကသွေးကြွနေတယ်တို.၊ သမ္မတလောက်သူရို.ကတတ်သလားလို. ဂလိုဂလို မျက်စလေးပစ်ပြတော့ ဒီထက်တတ်သေးလို.ပြောရရင်လည်းမကောင်း၊ သူရို.က အတတ်လွန်နေတာလို. ရွဲ.ပြောလည်း သိကြပါ့မလားမသိ။ တကယ်တော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ကိုယ်မမြင်ရတဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအချက်တွေနဲ.ဆိုတာ လူတိုင်းသိပေမယ့် အချိန်တန်တော့လည်း ကိုယ့်ပေတံလေးတွေပဲဆွဲဆွဲလာတတ်လွန်းလို. သတိပေးနေရတာပါ။
သူရို.တတွေ ဘာပေးဘာယူထားလည်း ကိုယ်မသိပေမယ့် သူရို.အပေးအယူကို စိတ်မ၀င်စားပေမယ့် တိုင်းပြည်လူမျိုးများနစ်နာဖို.ရှိလာရင် တစ်ထောင့်တစ်နေရာက (ဖေ့ဘုတ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်) အော်ပေးရမှာပေါ့။
သမ္မတကြီးက ကိုယ့်ထက်နားလည်လို. မြစ်ဆုံမှာ လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာပေါ့ဆိုရင်၊ ကိုယ့်ထက်နားလည်လို. လျှပ်စစ်မီးတွေ ရောင်းစားခဲ့တာပေါ့ဆိုရင် ရွဲ.တယ်ထင်မှာလားဗျ။
နိုင်ငံအရေးမှာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှ သူရဲကောင်းထင်နေတဲ့ငတုံးတွေကြောင့်ခက်ရတာပါ။ မင်းသုဝဏ် သပြေညိုကဗျာရေးတာက နယ်ချဲ.ကိုတော်လှန်ခဲ့တာ ဆိုတာ သိကြပါရဲ.လား၊ ဇော်ဂျီရဲ. တခုသော သင်္ကြန်အခါကဗျာက နယ်ချဲ.ဆန်.ကျင်ရေး လုပ်ခဲ့တာဆိုတာ သိကြပါသလား၊ အဲလိုလေးမှတွေးဖေါ်မရပဲ ဇာတိမာန်က အွန်လိုင်းတက်မှကြွတာဆို.ဘာတို.ပြောတဲ့အခါ သူရို.လို မသိပဲပြောသူတွေကြောင့် သိသူတွေ နှုတ်ပိတ်သွားရင် သမိုင်းမှာ တရားခံဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေပါမယ်လို.လည်း သတိပေးချင်ပါတယ်။
တကယ်ဆို ဖေ့ဘုတ်မှာ ကိုယ့်စာလာဖတ်တာ ဘယ်သူတွေလည်း၊ ကိုယ့်စာကိုလာရှယ်တာ ဘယ်သူတွေလည်းကြည့်ရုံနဲ. မှန်းလို.ရပါတယ်။ ၀ါးလုံးချေးသုတ်ယမ်းနေရုံတော့ မရပါဘူး။ ကိုယ်လက်ခုပ်သံများများလိုချင်ဆဲပေါ့။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ ပညာရှင်၊တတ်သိနားလည်သူ တစ်ယောက်တီးတဲ့လက်ခုပ်နဲ. ငမြှောက်ငချောက်အယောက်တစ်ရာ တီးတဲ့လက်ခုပ်ကွာတယ်လို. လက်ခံရင် စကားကို အရမ်းမပြောပါနဲ.လို.ပဲ ဆိုချင်ပါရဲ.။
ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ပြားမှမလျော့ဘူး။ ကျွန်တော်။ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်က သူရဲကောင်း။ေိေိ။
Posted by Maw Ni at 1:18 PM
Labels: စတိုင်ယာ, နိုင်ငံရေး
ရီလည်း ဖောင်း၏ မဖောင်း၏
၁။ အစစအရာရာ အပြောင်းအလဲ အတွက် ပြင်ဆင်နေကြသော ဤအချိန်တွင် ပြဿနာ ဖြစ်လာနိုင်သော နယ်ပယ်သည် အစိုးရအဖွဲ.အစည်း၏ ဌာနများ ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု အကြိမ်ကြိမ် ပြောခဲ့ပါသည်။ ဖူကူယားမားကလည်း ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးတွင် အရေးအကြီးဆုံးသည် အဖွဲ.အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးဖြစ်ကြောင်း သူ၏ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးစာအုပ်တွင် အထပ်ထပ် ဆိုထားခဲ့သည်။ ယနေ. ဖြစ်ပျက်နေကြသော ပြဿနာ အရပ်ရပ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာ အတိမ်အနက်ထက် တာဝန်ရှိသူ အသီးသီး၏ အပြောမတတ်မှုများကြောင့် ရှိရင်းစွဲ ပြဿနာလေးများ ပိုမိုကြီးထွားလာသည်ကို စိတ်မကောင်းစွာ တွေ.နေရသောအခါ ပြောပြချင်သည်တို.ရှိလာသည်။
၂။ ခရိုနီများဟုလည်းကောင်း၊ ကြိုးနီစနစ်ဟု လည်းကောင်း အချို.က ဆိုကြပါသည်။ ထို.အပြင် အထက်ကပြောင်းနေပြီ၊ အောက်က လိုက်မပြောင်းဟု စကားသံလည်းထွက်လာပါသည်။ Reform ဟူသော အသံကိုလည်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ကြားလာရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လက်ရှိအနေအထားအတိုင်း မဖြစ်တော့သည်ကို သိသူများလာပါသည်။ မည်သို. ပြင်ရမှန်း၊ မည်သည့် နေရာကို ပြင်ရမှန်း သိသူကတော့ နည်းမည်ထင်ပါသည်။
၃။ အမှန်တော့ ကြိုးနီစနစ်ဟူသည် ယခင် အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကတည်းက ဌာနအသီးသီးရှိဖွဲ.စည်းပုံ၊ အုပ်ချုပ်ပုံကို ယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုအခြေခံအပေါ်တွင် အထွတ်အဆင့်ဆင့် တင်တင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဌာနဆိုင်ရာများ၏ တိကျသေချာစေရန် တစ်ဦးတစ်ယောက်မရှိရုံနှင့် လုပ်ငန်းခွင် မပျက်စေရန် တည်ဆောက်ထားသော ထို အထက်အောက် ဖွဲ.စည်းပုံသည် (ယနေ. အိုင်တီနည်းပညာနယ်ပယ်နှင့် မကိုက်ညီတော့သော်လည်း) အလုပ်ဖြစ် တိကျ သပ်ရပ်သောကြောင့် အစဉ်အဆက် လက်မလွှတ်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သလို ဌာနဆိုင်ရာ ဖွဲ.စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးသည် အလွန်ခက်ခဲသောကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်သောကြောင့်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည့်တိုင် မပြင်မဆင် မပြောင်းမလဲ ရှိနေခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်ဟန်တူပါသည်။
၄။ ယနေ. ရီဖောင်းဟု ပြောကြသောအခါ အချို. လူကြီးများက လူထပ်တိုးတောင်းရန် ပြင်ကြပါလိမ့်မည်။ အချို. ပညာတတ်တို.က လူလျော့ပစ်ရန် အကြံပြုပါလိမ့်မည်။ အချို.က လူ.စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ထောင့်မှကြည့်ပြီး အချို.က သင်တန်းများ၊ ၀ပ်ရှော့များဖြင့် အရည်အချင်း မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ကြသည်။ အမှန်စင်စစ် ရသမျှ လုပ်အားကို ညှစ်ထုတ်ယူနေကြသော အပြင်အဖွဲ.အစည်းများနှင့် လုပ်အားပြုန်းတီးမှု များလွန်းနေသော အစိုးရအဖွဲ.အစည်းများသည် နိုင်ငံအတွက် အကောင်းဟု ပြောရန် ခက်ပါသည်။ ပြင်တော့ ပြင်ကြရပေမည်။
၅။ လူတိုးခြင်း၊ လူလျော့ခြင်းတို.သည် အမှန်စင်စစ် ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်ကို ပုံဖေါ်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ အဘယ်ဖြစ်စဉ်နည်းဟု မေးလာလျှင် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ရပ်၏ အကောင်းဆုံးရလာဒ်ကို အနည်းဆုံးသော လူအင်အား၊ အနည်းဆုံးသော ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် အတိုတောင်းဆုံးသော အချိန်တွင် ရရှိစေရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည့်ဖြစ်စဉ်ဟုပင် ဖြေရပါမည်။ လွယ်လှသည်တော့မဟုတ်ပါ။ ထိုဖြစ်စဉ် ဖြစ်လာစေရန် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကြိုးစားကြသည်။ အချို.က အီးအေ (Enterprise Architecture) ကိုသုံးသည်။ အချို.က ဘီပီအာ (Business Process Reengineering) ကို အသုံးပြုသည်။ နာမည် မည်သို.တတ်ပါစေ။ ယခုပြောနေကြသော ရီဖောင်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
၆။ မည်သည့် နည်းကို သုံးသည်ဖြစ်စေ၊ ရှေးဦးအာရုံစိုက်ရမည့် အရာသည် အဖွဲ.အစည်း၏ ပန်းတိုင် Mission and Vision(ဘာသာမပြန်တတ်၍ ပန်းတိုင်ဟု ခေတ္တ သုံးထားပါသည်၊ အားမရပါ) ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို မစ်ရှင်ဗီးရှင်းကို လက်ရှိမည်သို. ချီတက်နေသည်ကို သေချာ ပြန်လည် စစ်ဆေးရပါမည်။ လက်ရှိ အလုပ်ဖြစ်စဉ် (Business Process) များ၊ ဒေတာစီးဆင်းမှုများ၊ နည်းဗျူဟာများကို ပုံပေါ်အောင်ကြည့်ရပါသည်။ လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသော မိုဒယ် (As Is Model ဟု ပြောကြပါသည်) အတွင်းရှိ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များကို 'စက်စင်အောင်' လက်ကုန်ထုတ် သုံးသပ်လေ့လာရပါသည်။
၇။ ထိုသို. သုံးသပ်ပြီးလျှင် ဖြစ်လိုသော မိုဒယ် (To Be Model) ကို ရေးဆွဲရပါသည်။ သေချာသည်မှာ လက်ရှိ အလုပ်ဖြစ်စဉ်ကို သေချာ မလေ့လာခဲ့ပါက မည်သည့်နေရာကို တိုးမည်၊ မည်သည့်နေရာကို ဒေတာဗေ့စ် အဖြစ်ပြောင်းမည်၊မည်သည့်နေရာကို ကွန်ပျူတာ အကူအညီသုံး computerize လုပ်မည် စသည်ကို အခက်အခဲ တွေ.ရမည်သာဖြစ်သည်။ ထိုမိုဒယ်ရေးဆွဲခြင်းသည်လည်း ရှိရင်းစွဲ မိုဒယ်ကို အနည်းငယ်ပြုပြင်ရုံနှင့် အကောင်းဆုံး အလုပ်စီးဆင်းမှုဖြစ်စဉ်ရအောင် ကြံဆရပါသည်။ အဖွဲ.အစည်း၏ မစ်ရှင်ဗီးရှင်း ကို မလွတ်အောင်လည်း အာရုံစိုက်ရပါသည်။ မဖြစ်နိုင်သော မိုဒယ်ကို စကားလုံးအလှများသုံး၍ ပုံမဖေါ်မိစေရန်လည်း အာရုံထားရပါသည်။
၈။ Reform အတွက် အကျဉ်းမျှပြောမိသောအခါ အင်မတန်လွယ်ပါလားဟု ထင်စရာဖြစ်ပါသည်။ ထင်သလောက်မလွယ်ပါ၊ အင်မတန် ခက်ခဲသော 'ပညာရပ်' ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်လုပ်ရသည် မဟုတ်ပဲ စက္ကူပေါ်တွင်ပင် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ ကြည့်ရသည်မှာပင် 'ခက်'နေလျှင် တကယ်လုပ်ချိန်၊ လူများကို စီမံခန်.ခွဲချိန်၊ ဖြစ်စဉ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ချိန်တွင် အင်မတန်ခက်ပါသည်။ (ဥပမာတစ်ရပ်ပဲ ပြောပါမည်။ လူကိစ္စမဟုတ်ပါ။ လုပ်ငန်းခွင် အချို.နေရာများကို computerize လုပ်မည်ဆိုလျှင် ပြင်ပမှာငှား outsourcing သုံးမည်လား၊ open source သုံးမည်လား၊ အင်မတန် စဉ်းစားရခက်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာ သမားများ နားလည်ပါသည်) အပြောင်းအလဲကို လက်ခံချင်သူ၊လက်မခံချင်သူ၊ အစီအစဉ်ဟောင်းတွင် အလုပ်ဖြစ်နေသူ၊ အစီအစဉ်သစ်တွင် အံမ၀င်သူ၊ ဘယ်လိုမှသုံးစားမရသူ၊ စသည်စသည်သော အမျိုးမျိုးဖြစ်သည့် လူများ၊ ဖြစ်စဉ်များကို နေရာချထားရခြင်းသည် အင်မတန်ခက်ပါသည်။
၉။ ထို.ကြောင့်လည်း ရီဖောင်းနာမည်တတ်၍ လူတိုးတောင်းရန်စဉ်းစားကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါမည်။ နဂိုလေးလံသော ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးဝယ် ပို၍လေးရန် ထပ်ဆင့်ခြင်းသည် ရီဖောင်းမဟုတ်ပါ။ အသုံးမ၀င်ဟု ထင်ရသော လူတို.ကို ဖယ်ရှားခြင်းသည်လည်း ရီဖောင်းမဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် အပြောင်းအလဲကို ဗန်းပြ၍ ကိုယ်ကျိုးထုတ်ရန် စဉ်းစားနေသော အထက်ပိုင်းများရှိနေလျှင် တိုင်းပြည် 'နာ' ပါသည်။ သင်းတို.ခန်.ထားတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါ့ကို သင်းတို.ထုတ်လို.မရဘူးဆိုကာ အလုပ်မလုပ်ပဲ နေသော အငယ်ဝန်ထမ်းများရှိလျှင် လုပ်အား'နာ'ပါသည်။ တာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခံမှု၊ ကိုယ်ကျင့်တရား စသည်ဖြင့် မထွန်းကားပဲ ရီဖောင်းကိုသာ စွတ်လုပ်လျှင်လည်း အဆင်မပြေနိုင်ပါ။
၁၀။ ပြောခဲ့သမျှသည် ခက်ခဲသော အလုပ်ကို လွယ်လင့်တကူ မပြောမိ မလုပ်မိစေရန်သာဖြစ်ကြောင်း၊ ခက်ခဲသည်ဟု မလုပ်ပဲနေလျှင်လည်း အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် 'မင်းတို.ပရိယာယ်၊ ငတင့်တယ်၊ နားဝယ်မလည်ရာ' ဖြစ်၍သာ ပြောမိပါကြောင်း၊ ထို.ထက်ပို၍ ဆိုရန်မရှိပါကြောင်း။
Posted by Maw Ni at 1:07 PM
အတ္တများနှင့် ဆရာဝန် -၁
၁။ အသိတစ်ယောက် ရေးသော မှတ်ချက်ကို သဘောကျ၍ စပြောရပါမည်။ 'ဒီစကားပြောလို. အခြားသူများနှင့် အခင်မင်ပျက်ရလည်း ၀မ်းမနည်းပါ' ဟု ဆိုပါသည်။ ဆက်ပြောမည့် အကြောင်းအရာများကိုလည်း 'ထိုသို.ပင်' သဘောထားစေချင်ပါသည်။
၂။ ကျန်းမာရေး ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြဆိုကြသည့်အခါ မည်သူမှ စနစ်တကျ သုတေသန ပြုထားသော ရလာဒ်ကို ပြောကြသည် မဟုတ်ပဲ စိတ်မှန်းနှင့် 'ရမ်းတုတ်' နေကြသည်သာ များပါသည်။ (ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ရမ်းတုတ်ခဲ့ရပါသည်) ရမ်းတုတ်ကြသည်အတူတူ ဖြစ်သော်လည်း ဖြစ်နိုင်သမျှ ထောင့်ပေါင်းစုံမှ အနီးစပ်ဆုံး တွေးစေချင်ပါသည်။ ဥပမာ ဆိုပါမည်။ နောက်ပေါက် ဆရာဝန်လေးများ အရည်အသွေးကျဆင်း လာသည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ ကျောင်းသားများစွာကို ဆရာအင်အား မလောက်မငပဲ ရရှိသော အချိန်နည်းနည်းကလေးဝယ် အလျှင်အမြန်မွေးထုတ်ရသဖြင့်ဟုလည်း ဆိုကြပါသည်။ အမှန်စင်စစ်မူ အရည်အသွေးကျဆင်းလာသည်ဆိုသည်ကလည်း စနစ်တကျ တိုင်းတာထားခြင်းမျိုးမဟုတ်။ (ညံ့ဖျင်းသူများ အတွေ.များလာသည် ဆိုသော်လည်း ယခင်ဆရာများလည်း အစဉ်အဆက် ထိုသို.ပြောသံကြားခဲ့ဘူးပါသည်) ဆရာအင်အားကြောင့်၊ အချိန်နည်းနည်းကြောင့် ဘာကြောင့်ညာကြောင့်များသည်လည်း စနစ်တကျ တိုင်းတာတွက်ချက်ထားသည်မဟုတ်ပဲ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အကြောင်းရင်းများကို အတွေ.အကြုံအရသာ မှန်းဆ၍ထားသော အကြောင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို. မှန်းချက်နှင့် ရှာထားသော အကြောင်းရင်းများကို 'အတည်အဖြစ်' ယူဆလိုက်သောအခါ ဆရာဝန်မွေးထုတ်များ၏ အရည်အသွေး ပြည့်ဝစေရန် ပြင်ဆင်မည်ဆိုသောအခါ 'မှန်းဆအကြောင်းရင်းများကို အမှန်အဖြစ် ပြင်ဆင်ရန် အားထုတ်ခြင်း' သည် မှန်ကန်သော အားထုတ်ခြင်း ဖြစ်ပါ၏လော ဆင်ခြင်စေချင်ပါသည်။ သို.သော် မလုပ်သည်ထက် လုပ်သည်က တော်သေးသည်ဟုပဲ ချီးကျူးရပါမည်။
၃။ ယခု ဆက်ပြောမည့် အရာများသည်လည်း စနစ်တကျ သုတေသန ပြုထားသည်မဟုတ်ပဲ 'ထင်လုံး' များသာ ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံလိုပါသည်။ သူတပါး၏ ထင်လုံးများကို ချေပရန် ထင်လုံးများကို ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်းသည် သင့်လျော်လျောက်ပတ်သော အပြုအမူ မဟုတ်ဟု ယူလိုက ယူနိုင်ပါသည်။ သို.ရာတွင် လူ.သဘောသဘာဝကို အခြေခံ၍ ထောင့်စုံနိုင်သမျှ စုံအောင်တွေးတောနိုင်စေရန် အားထုတ်ထားပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ဘက်တစ်ဘက်တည်းကိုသာကြည့်၍ ထင်လုံးများကို အဟုတ်လုပ်၍ 'ငိုတတ်တဲ့ ကလေး မုန်.စားရ' စေရန် အော်နေသော ငရမန်ဆရာဝန်များအတွက် 'ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိသော ထင်လုံးများကို အမှန်တကယ်လက်ရှိအနေအထားပေါ် ထင်ဟပ်၍' ပြောပြလိုသည်များ ရှိလာပါသည်။
၄။ ယခင်က ဆရာဝန်မွေးထုတ်မှန်သမျှကို တိုင်းပြည်၏ လိုအပ်သော နေရာတွင် ခန်.ထားရန်နိုင်အတွက် အလုပ်ဝင်မှ ဆေးကုသခွင့် လက်မှတ် 'ဆမ' ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ယခု မွေးသမျှ မခန်.နိုင်တော့ပါ။ ထိုအခါ ဆမအတွက် သင်တန်းတစ်ခုဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရပါသည်။ ထိုကိစ္စများတွင် မှန်သည်မှားသည် ပြောရန်မရှိပါ။ သို.ရာတွင် အလုပ်လက်မဲ့ဆရာဝန် ဟုပြောကြတိုင်း 'အူထဲကယား' ပါသည်။ ဟိုးရှေးယခင်ကျောင်းသားကြီးများသည် တတိယနှစ်ပြီးသည့်အခါ (ဆရာဝန်များ အလွန်လိုအပ်သော ကာလက ဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် တရားဝင်သည် မ၀င်သည်အပထား) ပြင်ပ ဂျီပီ ဖွင့်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ပြောသံကြားဘူးပါသည်။ ယခု ဘွဲ.လက်မှတ်၊ ဟောက်စ်ဆာဂျင် ကွန်ပလိရှင်း၊ ဆမ စသည်ဖြင့် လက်နက်ကြီးငယ် အပြည့်အစုံတပ်ဆင်ပေးထားသည့်တိုင် 'နို.သက်ခံ စို. ' ချင်နေသကဲ့သို. အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရပါသည်ပြောသောအခါ နားလည်ရန်အတော်ခက်ရပါသည်။ ဆရာဝန်မွေးထုတ်သမျှ အစိုးရက ခန်.အပ်နိုင်သော နိုင်ငံရှိလျှင်ပြောပြစေချင်ပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလောက်ကို ရှာလာပြီး လာပြောမည်စိုး၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံမည်မျှ ဆိုသည်ကိုပါ ရှာလာစေချင်ပါသည်။ ကမ္ဘာ. စံနှုန်း တစ်ခုတလေကို ဆွဲဆွဲထုတ်လာပြီး အော်အော်နေသည့်အခါလည်း စိတ်ညစ်ရသော်လည်း ဤကိစ္စကို ခေတ္တချထားခဲ့ပါမည်။
၅။ ယခင်ကိုပဲ ပြန်သွားရပါမည်။ ယခင်ခေတ်က မွေးထုတ်သောဆရာဝန်များသည် တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရမည်မှာ အသေအချာဖြစ်၍ အလုပ်မ၀င်လျှင် 'ဆမ' ထုတ်မပေးရေးမူချခဲ့သည်ကို အပြစ်ပြောခဲ့ကြသော်လည်း 'အလကားမတ်တင်း' နှင့် အဆင့်မြင့် ပညာများကို သင်ကြားပေးခဲ့ကြသည်ကိုတော့ 'ရူးချင်ယောင်ဆောင်' နေသကဲ့သို. ယနေ.အထိ အမွေပါလာသည်ကိုလည်း မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ကာ ဘောင်းထိုးခဲ့ရသည်ကိုပဲ ထပ်ပြန်တလဲလဲ 'အော်ကြဟစ်ကြ အရေးဆိုကြ' ပါသည်။ ဘောင်းကိစ္စသည် 'မထိုးမဖြစ် အကျပ်ကိုင်၍ ထိုးခဲ့ရသယောင်' ပြောကြပါသည်။ တကယ်တော့ မကျေနပ်လျှင် ဘောင်းမထိုးရုံသာဟု ပြောလျှင် ရွဲ.ပြောသည် ထင်ကြပါမည်။ အကျပ်ကိုင်သည် ဆိုကြပါမည်။ တကယ်တော့ တိုင်းပြည်က အလကားနီးပါး သင်ကြားပေးနေသော ဆရာဝန်ပညာရေးသည် (ယခုအထိ တစ်လရှစ်ရာမျှသာရှိပါသည်) တိုင်းပြည်အတွက် အရှုံးခံ၍ မွေးထုတ်နေရခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ဆရာဝန်သစ်လွင်တစ်ဦး မွေးထုတ်ရန်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် ၁၅သိန်းခန်. ကုန်ကျ၍ လျှော်ကြေးတောင်းလျှင် ၁၀သိန်းသာ ဖြစ်သည်ကို 'ဈေးတွက် တွက်လိုသော အီကောနောမစ် ဆရာဝန်လေးများ' အားပြောလိုပါသည်။ ဘောင်းထိုးစဉ်က 'ပြီးပြီးရော ဖတ်၍ပင်မကြည့်ပဲ' ထိုးခဲ့ကြ၍ လွယ်လင့်တကူပင်မေ့လိုက်ကြပါသည်။ ထိုဘောင်း အသက်ဝင်ချိန် ရောက်လာသောအခါ မတရားပါဟု အော်ကြပါသည်။
၆။ တိုင်းပြည်ကို ချစ်လွန်းလို.ဟု အော်နေရန် အချိန်အခါ မဟုတ်တော့သည်ကို နားလည်ပါသည်။ တိုင်းပြည်အကြောင်း၊ စနစ်အကြောင်း ဆဲနေကြသည်ကို နားစိုက်ကြည့်လျှင် ကိုယ့်ဘက်မှ ရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကိုသာ အာရုံစိုက်၍ အခြားသော ဘက်မှ 'ရှုကြည့်' နိုင်ရန် အားထုတ်ကြသည်ကို မတွေ.မိသလောက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အပေးအယူ ကိစ္စဟု ယူဆလျှင်လည်း 'ကိုယ်ယူခဲ့သည်ကိုတော့' မမေ့ကြစေချင်ပါ။ စနစ်တွင်အားနည်းချက်များ၊ ခေတ်နှင့် မကိုက်ညီသည်များ ရှိသည်ကို ၀န်ခံပါသည်။ အရာရာတိုင်းကို ခေတ်စနစ်အား 'ပုံချ' ရန်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ လူတိုင်း၏ လိုအင်နှင့် ကိုက်ညီသော စနစ်ဆိုသည်ဖြင့် မရှိနိုင်ပါ။ အတ္တကို အခြေပြုစဉ်းစားသော ဆရာဝန်အချို.အတွက် ဆရာဝန်အားလုံးကို ၀ါးလုံးရှည်ဖြင့် ယမ်းသလိုဖြစ်မိပါက တောင်းပန်ရပါမည်။ မသက်ဆိုင်သူများကို တောင်းပန်ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း သက်ဆိုင်သူများကိုမူ အခင်မင် ပျက်ရလည်း ၀မ်းမနည်းပါဟု ထပ်မံ၍ ဆိုပါမည်။
Posted by Maw Ni at 1:05 PM
Labels: ကျင့်ဝတ်, ဆေးပညာ, ဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်အနေနဲ. ပြောပြရေးသားတာမျိုးမလုပ်ဖို. တောင်းပန်ပါတယ်။
► 09/19 (19)
► 12/04 (30)